I-Android Marshmallow neNougat kubusa kumadivayisi we-Android | Izindaba zamagajethi
I-Android Marshmallow neNougat zibusa kumadivayisi we-Android
Sibhekene nokuthuthuka okusobala ngokuhlukaniswa kwezinhlobo ezahlukahlukene zohlelo lokusebenza ezisetshenziswa kumadivayisi we-Android, kepha noma kunjalo sibhekene nombhedo wangempela ngokusetshenziswa kwezinguqulo ezintsha isephansi kakhulu.
Futhi asikhulumi nge-Android Marshmallow, iNougat noma i-Android Oreo yakamuva, sikhuluma ngokusatshalaliswa kwe I-Android Lollipop ithatha isabelo esingu-26,3% kuwo wonke amadivayisi kanye 13,4% aseseKitKat.
Kepha ngaphandle kwalokhu, akuyona yonke into eyizindaba ezimbi nokuthi siphawule kahle kangakanani esihlokweni salesi sihloko, izinhlelo ezivelele ngale nyanga kaDisemba yi-Android Marshmallow neNougat. Zombili lezi zinhlelo zisanda kwenziwa futhi Endabeni yeNougat, singasho ngisho nokuthi yi-OS yesibili esetshenziswe kakhulu njengoba lesi sithombe esingezansi sibonisa:
Phakathi kwazo zombili lezi zinhlelo (iMarshmallow neNougat) zakha ngaphezu kuka-50% wezinhlelo ezisebenzayo zamanje, ikakhulukazi ama-53%. Lezi ngokungangabazeki izindaba ezinhle kakhulu kubasebenzisi be-Android ababona ukwahlukana kuthola kancane kancane. Kepha umhlabathi ulahlekile okwamanje ku-Android Oreo, inguqulo entsha ye-Android itholakala kuphela kumadivayisi weGoogle futhi lokhu kusinda kakhulu yize amadivayisi ahambisana nale nguqulo engezwa kancane kancane.
Okufanele sikwenze kucace ukuthi idatha eqoqwe ngesikhathi esiyizinsuku eziyi-7 kuze kube ngumhla ka-11/12/2017 ikhombisa iphesenti elihle lamadivayisi asezinguqulweni zakamuva zohlelo futhi njengenjwayelo kufanele silinde ukuthi lifike .kuningi. Okwamanje yizindaba ezimnandi kepha ngalo mqondo i-Android iswele okuningi uma sikuqhathanisa nembangi yayo eqondile ye-iOS, ngakho-ke siyethemba ukuthi bobabili i-Google, ama-opharetha nemikhiqizo yama-smartphone esebenzisa i-Android bazoqhubeka nokusebenza kuyo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Android » I-Android Marshmallow neNougat zibusa kumadivayisi we-Android
ICall of Duty: I-WW2 iphakamisa ukuthengiswa komdlalo wevidiyo ngoNovemba
Lungiselela okungenani ama- $ 5000 ukuthenga iMac Pro